September 24, 2020 September 24, 2020 by lectionary
1 EKPERE NHUNYE
2 UKWE ORIRI NSỌ: Abuọma 118:4
3 EKPERE A NATACHAA ORIRI NSỌ
Onyenweanyị, anyị na-arịọ Gị, were obiọma meek a onyinye nke a, anyị bụ ndi nke Gị na-ehunyere Gị masị Gị. Ka ihe anyị ji okwukwe na ịhụnanya ebutere Gị ghọọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke eluigwe. Site na Kristi Onyenweanyị.
UKWE ORIRI NSỌ: Abuọma 118:4
I meela ka anyị mata iwu gị, ka anyị wee kwụdosiike na ya. Oh! Ka m kwụdosiike n’idobe iwu gị.
Abụ m ezigbo onye ncheatụrụ, amaara m atụrụ m, atụrụ m amarakwa m. (Jọn 10:14)
Onyenweanyị, I jirila ihe ọgbụgba ndụ Gị gbaa anyị ume. Biko were obiọma Gị na-enyere anyi aka mgbe dum. Mee ka anyị site n’ihe omimi nke a, na ezi ọrụ ndụ anyị rite uru nke nzọpụta. Site na Kristi Dinwenụ anyi.
Categories Igbo Mass Prayers Post navigation
Igbo Readings for September 26, 2020, Satọdee Izu Nke Iri Abụọ na Ise